पार्टी फुट्न नदिन राप्रपाका तीनै अध्यक्षको प्रतिबद्धताNepalpana - Nepal's Digital Online
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टीमा फुट आउन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको पार्टी एकताको महाधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्षद्धय थापा, राणा र लोहनीले पार्टीको वृहत्तर हितका लागि आफूहरु त्याग गर्न पनि तयार रहेको बताए ।
अध्यक्ष थापाले महाधिवेशनबाट पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने प्रतिज्ञा गर्न पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।
पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजान आफूले नयाँ नेतृत्वको चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको अध्यक्ष डा। लोहनीले बताए । डा लोहनीले अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनलाई समर्थन गर्ने घोषणा यस अघि नै गरिसकेका छन् । पार्टीमा नयाँ युगको सुरुवात महाधिवेशनले गर्नेभन्दै लोहनीले पार्टी फुटलाकि भनेर चिन्ता नगर्न पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘तपाईहरुले पार्टी फुटलाकि भन्ने चिन्ता नगर्नुस्, पार्टीमा फुट हुँदैन । अव पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजानुको विकल्प छैन । त्यही काममा हामी लाग्नेछौं । नेतालाई सम्मान, कार्यकर्तालाई माया गरेर मात्रै पार्टीले मुलुकलाई निकास दिन सक्नेछ ।’
उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापा 'बादल'लाई छ्यापछ्याप्ती भाेट, राप्रपा पनि समर्थनमा !
मंसिर १५, २०७८ बुधवार २०:०६:१२ बजे : प्रकाशित